October 2, 2021 - Channel Lover
နိုင်ငံရေးသမားတွေထပ် သစ္စာပိုရှိကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးနှင့် မအူဝဲ
October 2, 2021 by Channel Lover
နိုင်ငံရေးသမားတွေထပ် သစ္စာပိုရှိကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးနှင့် မအူဝဲ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်မှာသတင်းသုံးနေသော ပိုင်တံခွန်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက စစ်ကောင်စီနဲ့ ညှိနိူင်းပြီး အပြင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပေးခဲ့ရာ ခံဝန်ကတိလက်မှတ်ထိုးပေးရင် ထုတ်ပေးမယ် ဆိုသဖြင့်လက်မှတ်မထိုးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံပါ မှားပါတယ် နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးပေးရင် လွှတ်ပေးမယ် လို့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ ပြောရာ နှစ်ဦးလုံးကလက်မှတ် မထိုးဘဲ ထောင်ထဲမှာပဲ ဆက်နေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြောင်း အတွင်းသတင်းတွေက တဆင့်သိရပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ကိုတီနဲ့မအူဝဲ unicode နိုငျငံရေးသမားတှထေပျ သစ်စာပိုရှိကွောငျး ပွသခဲ့တဲ့ ပွတေီဦးနှငျ့ မအူဝဲ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ကရငျပွညျနယျမှာသတငျးသုံးနသေော ပိုငျတံခှနျကိုးကှယျခဲ့တဲ့ နာမညျကွီး ဆရာတျောကွီးတဈပါးက စဈကောငျစီနဲ့ ညှိနိူငျးပွီး အပွငျရောကျဖို့ကွိုးစားပေးခဲ့ရာ ခံဝနျကတိလကျမှတျထိုးပေးရငျ ထုတျပေးမယျ ဆိုသဖွငျ့လကျမှတျမထိုးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောငျနှံပါ မှားပါတယျ နောကျမလုပျတော့ပါဘူး ဆိုပွီး … Read more
အိမ်မှာမစိုက်ဘဲနဲ့တအားပေါက်နေတာ ရူပ်လို့ဆိုပြီး နူတ်ပစ်နေတာ အခုလိုအဖိုးတန်မှန်း မသ်ိခဲ့ဘူး
အိမ်မှာမစိုက်ဘဲနဲ့တအားပေါက်နေတာ ရူပ်လို့ဆိုပြီး နူတ်ပစ်နေတာ အခုလိုအဖိုးတန်မှန်း မသ်ိခဲ့ဘူး “ကျောက်သင်ပုန်းရွက်အစွမ်း အံ့မခမ်း” ဒါကတော့(Peperomia pellucida)ကျောက်သင်ပုန်းရွက်(သို့) နတ်သမီး ကွမ်းရွက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းမှ စာတွေကို ပြန်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အလေ့ကျပေါက်သည့် အပင်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပင်မှာ ကင်ဆာရောဂါကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Antioxidants ပါဝင်တယ်။ ဗီတာမင်စီဓါတ်များတယ်ပြီး ဗီတာမင်အေဓါတ်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့ Beta-carotene ပါဝင်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများကတော့ ဒူလာဆေး၊ အဆစ်မြစ်ရောင် (ဂေါက်ရောဂါ) အတွက် ဒီအပင်ကို သုပ်စားခြင်း၊ ပြုတ်စားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဆေးအဖြစ် အသုံပြုပုံများ- (၁) ရင်သားကင်ဆာရောဂါအတွက် အရွက်လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ကို သန့်ရှင်းစွာ ဆေးကြောပြီး ထောင်းကာ ရင်သားပေါ်ကို အရည်သုတ်လိမ်းပေးခြင်း၊ အဖတ်ကို အုံပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကုသပေးလျှင် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ (၂) … Read more
မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခံရပြီး သံဃာတော် (၅) ပါး ၊ လူ (၃) ယောက် ဖမ်းဆီးခံရ(ရုပ်သံ)
မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခံရပြီး သံဃာတော် (၅) ပါး ၊ လူ (၃) ယောက် ဖမ်းဆီးခံရ မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် သံလျှက်မှော်အနောက်ရပ်ကွက်ထဲမှာ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက် နေ့ခင်း ၁ နာရီကျော် အချိန်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့ မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွဲရာမှာ အိမ်စီးကားနဲ့တိုက်ပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ကာ သံဃာတော် (၅) ပါး နဲ့ လူ (၃) ဦး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဆရာတော်တွေကတော့ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ဥူးသီရိန္ဒ နဲ့ ဥူးသုစိတ္တ ၊ ဗန်းမော်တိုက်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ဥူးဝိလာသ၊ … Read more
ဘ၀ကို အရှုံးပေးသွားတဲ့ ရွှေဘိုမြို့က အဘွားအိုတစ်ဦး
ဘ၀ကို အရှုံးပေးသွားတဲ့ ရွှေဘိုမြို့က အဘွားအိုတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်တည်းကပင် ကိုဗစ်ဒဏ်​ကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြည်သူအချို့ဟာ လူမှုရေး၊စီးပွားရေးအစရှိတဲ့ ပြဿနာပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အခုအချိန်မှာဆို ရွှေဈေးနှင့်ဒေါ်လာဈေးအဆမတန်ထိုးတက်မှုများကြောင့် စီးပွားရေးရပ်တန့်မှုများ ပိုမိုကြုံတွေ့လာရတဲ့အပြင် အလုပ်လက်မဲ့လူဦးရေဟာ ပိုလို့များပြားလာပါတော့တယ်။ ဒီလို အဆင်မပြေမှုများစွာကို ခံစားလာကြရတဲ့ ပြည်သူများဟာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို အဆမတန်ခါးစည်းခံလာကြရပါတော့တယ်။ စက်တင်ဘာ(၃၀)ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ရွှေဘိုမြို့တောင်တံခါးမူးထဲတွင် အသက်(၇၀)အရွယ်အဖွားတံတားပေါ်မှခုန်ချ၍ ရေနစ်ပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာ အခုထိ မသိရသေးတဲ့အပြင် ပြည်သူများစွာကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ credit unicode ဘဝကို အရှုံးပေးသှားတဲ့ ရှဘေိုမွို့က အဘှားအိုတဈဦး မွနျမာနိုငျငံဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျတညျးကပငျ ကိုဗဈဒဏျ​ကို ခံစားခဲ့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပွညျသူအခြို့ဟာ လူမှုရေး၊စီးပှားရေးအစရှိတဲ့ ပွဿနာပေါငျးမြားစှာကိုရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျအခုအခြိနျမှာဆို ရှစြေေးနှငျ့ဒျေါလာစြေးအဆမတနျထိုးတကျမှုမြားကွောငျ့ စီးပှားရေးရပျတနျ့မှုမြား ပိုမိုကွုံတှလေ့ာရတဲ့အပွငျ အလုပျလကျမဲ့လူဦးရဟော ပိုလို့မြားပွားလာပါတော့တယျ။ ဒီလို … Read more
“ဒီနေ့ တစ်စက်ရုံလုံး ပျော်တဲ့နေ့” မင်္ဂလာရှိတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ..
“ဒီနေ့ တစ်စက်ရုံလုံး ပျော်တဲ့နေ့” မင်္ဂလာရှိတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ.. မနေ့ည ၇ နာရီက ကျွန်တော့်ရဲ့ FAME ဝန်ထမ်းဖြစ်သူ မောင်မျိုးသက်လွင် လွတ်မြောက်လာပါပြီ.. အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း မောင်မျိုးသက်လွင်ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ လုယက်သူနှစ်ဦးကို ခုခံကာကွယ်ရင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုကနေ ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.. ကိုဗစ်အခြေအနေနဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် အမှုရင်ဆိုင်ချိန်ဟာ ၁ နှစ်နဲ့ ၈ လနီးပါးလောက် ကြန့်ကြာနေခဲ့ရာကနေ အခုလို အပြီးသတ် လွတ်မြောက်လာခဲ့အတွက် အားလုံး ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်.. အမှုရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ မောင်မျိုးသက်လွင်ကို အလုပ်ကနေ မထုတ်ပယ်ဘဲ လစာအပြည့်နဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိပေးထားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကို အပြည့်အဝ ပေးထားတဲ့အပြင် အမှုပြီးဆုံးတဲ့နေ့အထိ ဆေးခွင့်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်.. FAME မှာ … Read more
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ ဒီလအတွင်း သူများကိစ္စကြားဝင်ကူညီခြင်း၊အာမခံခြင်း တွေကြောင့်အထူးဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။လင်မယားကြား မိတ်ဆွေတွေကြား ဘယ်သူ့ကြားမှမဝင်မိပါစေနဲ့။ ဘယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အခုကာလမှာ ရတာကနည်းနည်း ၊ပြဿ နာရှင်းရတာကများများဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများကျပျောက်ခြင်း သူခိုးခိုခံရခြင်းတွေကြုံနိုင်တယ်။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ စီးပွားတွက် တွက်နေတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်။ ချစ်သူကိုအချိန်ပေးဖို့ထက် ငွေနောက်ပဲလိုက်နေပါလိမ့်မယ်။အလုပ်မှာရန်ပေါ်နိုင်တဲ့ကာလပါ။ အလုပ်ရှာနေသူများ အလုပ်ရဖို့ဝေးနေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းရင်းနှီးသူတွေနဲ့ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး သိပ်မညံ့ပေမဲ့ ပညာရေးကံကြမ္မာကတော့ အညံ့ဆုံးအနေအထားကို ရောက်နေတဲ့ကာလပါပဲ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဘယ်သူကိုမှ မယုံသင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အထူးဟော = ကံညံ့နေသည်။ ယတြာ = သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက် မွေးနေ့နံနက်မှာ ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။ တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်နေလိမ့်မယ်။ အရာရာသတိထားဆောင်ရွက်ပါ။ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စများ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေရပါတယ်။ မသွားချင်တဲ့နေရာသွားရခြင်း၊နယ်ပြောင်းခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အထက်လူကြီးက မိမိအပေါ်အမြင်မကြည်တာမျိုးတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ စိတ်အရမ်းညစ်ရတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်အချင်းချင်းစကားအခြေအတင်များရတတ်တယ်။ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ ကူညီမှုအများကြီးရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ … Read more
သိန်း(၇၀၀)ကျော် ဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးမှ သိန်း(၅၀၀)ကျော်ကို စိတ်ကူးပေါက်ပြီး လာပြန်ထားသွားတဲ့ ခင်ဦးမြို့က ထူးဆန်းတဲ့သူခိုး
ရွှေငွေ ရတနာ သိန်း(၇၅၀)ကျော် ဖောက်ထွင်း ခိုးယူသွားပြီးမှ. . သိန်း(၅၀၀)ကျော် ပြန်လာထားပေးသွားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုး . ခင်ဦးမြို့က အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းမှု ရွှေငွေရတနာ သိန်း(၅၀၀) ကျော်ဖိုးပြန်တွေ့ပြီ .. စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ် ပင်တင်းကျေးရွာ၌ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသော ရွှေ၊ ငွေရတနာ တန်ဖိုးငွေသိန်း(၇၅၀) ကျော်ဖိုးမှ သိန်း(၅၅၀) ကျပ်ဖိုးခန့် ပြန်လည်ရရှိကြောင်း မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ နိုဝင်ဘာ ၄ရက်နေ့ ည၉နာရီခန့်က ခင်ဦးမြို့နယ် ပင်တင်းကျေးရွာလမ်းဘေးရှိ ဝန်းထရံ၌ ချိတ်ထားသော မသင်္ကာစရာ အထုပ်တစ်ထုပ် တွေ့ရှိရကြောင်း.. ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားသဖြင့် မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဇော်ဆွေ၊ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ် ကျော်လင်းဖြိုးတို့ ဦးဆောင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်.. ၎င်းအိတ်ထဲမှ ရွှေထည်ပစ္စည်း ၂၂မျိုးနှင့် ငွေစက္ကူငါးထောင်တန်(၁)ရွက်၊ … Read more
သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် တတ်နိုင်သလောက် speak out လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ အားကြိုးမာန်တက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို လေးစားအားကျနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့ သတင်းအချက်များကိုလည်း အားလုံးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလေ့ရှိရာ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း မင်းမော်ကွန်းရဲ့Facebook Story တွင် ပုံလေးနှစ်ပုံ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားပြီး အပြတ်အသတ်ကို မိုက်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း ” ပြေးလာချင်တယ် ရန်ကုန် ” ၊ ” … Read more
သက်သေထွက်ဆိုတဲ့နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မကြည့်ရဲခဲ့တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း(ရုပ်သံ)
သက်သေထွက်ဆိုတဲ့နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မကြည့်ရဲခဲ့တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြည့်လည်း မကြည့်ရဲဘူးဗျ၊ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း မကြည့်ရဲဘူးဗျ၊ အသံက တိုးတိုးလေးဗျ။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံး တွေ့ဖူးတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲက အတိုင်းပဲ ထွက်ဆိုသွားတယ်။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စွဲဆိုထားသည့် အဂတိလိုက်စားမှုအပေါ် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ သက်သေထွက်ဆိုချက်များနှင့် ပါတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ပြောကြားချက်) source eleven unicode သကျသထှေကျဆိုတဲ့နမှေ့ာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို မကွညျ့ရဲခဲ့တဲ့ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး(ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ ဦးဖွိုးမငျးသိနျးက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ကွညျ့လညျးမကွညျ့ရဲဘူးဗြ၊ ကနျြတဲ့လူတှလေညျး မကွညျ့ရဲဘူးဗြ၊ အသံက တိုးတိုးလေးဗြ။ ဦးဖွိုးမငျးသိနျးကတော့ ခငျဗြားတို့ ကြှနျတျောတို့ … Read more